Tifatiraha Sawirka Soomaaliya
Tifatiraha Sawirka Bilaashka ah ee khadka tooska ah
Tifatiraha Sawirka waa aalad awood u leh tafatirka sawirka bilaashka ah waana aalad ku habboon qalabka tafatirka sawir-qaadista bilaashka ah oo loogu talagalay in sawirrada lagu saxo khadka tooska ah. Waxay kaa caawinaysaa inaad hagaajiso sawirka khadka tooska ah ee internetka, wax ka beddel, wadaag iyo kaydso sawirradaada. Waxaa loo isticmaali karaa dib-u-cusbooneysiinta sawirrada lagu qaado kamarad kasta oo dijital ah. Qalabka laga heli karo barnaamijkan tafatirka sawir xirfadeedka waa mid saaxiibtinimo leh oo si fudud loo isticmaali karo. Barnaamijkan xirfadeed ee tafatirka sawirku wuxuu bixiyaa fursado dhowr ah oo loogu talagalay hagaajinta sawirada iyo hagaajinta sawirrada.
Tani waa jiilka cusub ee softiweerka tafatirka muuqaalka ee internetka. Waxay bixisaa fursado dhowr ah oo lagu tafatiri karo sawirrada. Softiweerkan waxaad si fudud ugu hagaajin kartaa sawirradaada, dukumiintiyada naqshadeynta ee khadka tooska ah, u kobcin kartaa sawirkaaga, waxaad u abuuri kartaa muuqaal aan xadidneyn, daabacan kartaa isla markaana isla wadaagi kartaa sawirradaada Waa barnaamij tafatirka muuqaalka internetka oo bilaash ah oo leh qalab tafatirka sawir awood badan iyo astaamo horumarsan. Waxaad ka dhigi kartaa sawirradaada kuwo soo jiidasho leh oo cajiib ah.
Kani waa tifaftiraha sawirka ugu fiican ee khadka tooska ah ee kuu oggolaanaya inaad hagaajiso, wax ka beddesho, kor u qaaddo, isla markaana wadaagto sawirradaada isla markiiba. Qalabkan tafatirka sawir-qaadashada oo bilaash ah ayaa ku habboon tafatirka sawirrada khadka tooska ah ee bilaashka ah. Tani waa fududahay, fududahay in la isticmaalo iyo tifaftiraha sawirka badan oo awood kuu siinaya inaad hagaajiso, wax ka beddesho, isku darto, isku darto, kalagoyso, oo aad ku sameyso noocyo ka mid ah howlaha tafatirka sawirrada sawiradaada. Waad abuuri kartaa, keydin kartaa, heli kartaa, soo dejin kartaa, daabici kartaa oo la wadaagi kartaa sawiradaada tifaftiraha muuqaalka tooska ah ee bilaashka ah ee bilaashka ah. Kani waa aalad tafatirka sawir fudud oo ku habboon hagaajinta sawiradaada.
Kani waa sawir-qaade sawir-yaqaan ah iyo barnaamijka tafatirka sawirrada. Waxaad si fudud ugu shubi kartaa una wadaagi kartaa sawiradaada adoo adeegsanaya barnaamijkan horumarsan. Tani waa tayo xirfadeed oo gebi ahaanba bilaash ah soo dejiso. Waxay bixisaa afar shaandheyn sawir oo waaweyn - Astaamaha otomaatiga ah, Strokes Brush, Glimmer, iyo Noise.
Abuur, cabir, wax ka beddel oo ku soo celi qoraalka sawirradaada barnaamijkan tafatirka sawir-qaadashada bilaashka ah ee khadka tooska ah. Waad beddeli kartaa asalkaaga, hagaajin kartaa dhalaalka iyo midabada qoraalka, waxaad ka saari kartaa xargaha iyo jajabyada kana saari kartaa khadadka iyo qaababka aan loo baahnayn sawiradaada. Abuur qoraal, dulmar, leydilo, wareegyo, tilmaamo, asalka, iyo hooska leh qaababka, xarfaha iyo qaababka hooska ee laga heli karo tifaftiraha cajiibka ah.
Waxaad ku sameyn kartaa tafatir deg deg ah oo fudud iyo dib u habeyn sawirradaada ah adoo adeegsanaya aaladgan tafatirka sawirrada tooska ah ee internetka. Si dhakhso leh oo fudud ayaad u beddeli kartaa midabka, ka saari kartaa isha casaanka, abuuri kartaa xudduudda, ka saari kartaa isha casaanka, isku toosin kartaa walxaha, waxaad u abuuri kartaa boodbood iyo digsi, sawirkana waad ka qaadi kartaa adigoo adeegsanaya aaladda ay wadato Tani waa aalad aad u fiican oo kuu oggolaaneysa inaad si dhakhso leh dib ugu hagaajiso sawirradaada. Xitaa waad la wadaagi kartaa shaqadaada asxaabtaada iyo qoyskaaga adoo adeegsanaya astaamahan tafatirka fudud. Haddii aad jeceshahay inaad ku sameysid dib-u-hagaajinta khadka tooska ah ee sawirradaada, iskuday inaad isticmaasho Paintburner.
U adeegso aaladdan awoodda badan cabirka, dalagga iyo wax ka beddelka sawirrada si fudud. Abuurista iyo dib-u-habeynta sawirrada waxaa lagu sameeyaa hab fudud, oo dareen leh kombuyutarkaaga. Waad goosan kartaa, kala bixin kartaa, rogrogmi kartaa isla markaana dhejin kartaa sawir. Si aad ugu darto xuduudaha, u samee laba jibbaaran, geesaha wareegsan, ama ku sameyso calaamado shabag leh tifaftiraha sawir xirfadeed ee khadka tooska ah ee tayada leh. Waad yareyn kartaa, wax ka beddeli kartaa oo ku keydin kartaa shaqadaada daqiiqado gudahood!
U beddelo sawirradaada khadka tooska ah adoo adeegsanaya noocyo bilaash ah, midabbo, iyo qaabab. Abuurista, dib u habeynta, iyo miirayaasha dalbashada waxaa lagu sameeyaa si dhakhso leh Paintbrush. Ku abuur sawirro xirfadlayaal fiirinaya sawir-tifaftiraha khadka tooska ah ee bilaashka ah. Haddii aad jeceshahay inaad ku shaqeysid midabyo, codad iyo isbeddel, isku day Paintbrush.
Waad ku dari kartaa qoraalka oo waxaad ku abuuri kartaa boorar leh Fonts Online. Adigoo adeegsanaya Fonts Online, waxaad qoraalka ugu rogi kartaa boodhadh casri ah oo leh astaamo qabow oo kala duwan. Ka dooro boqolaal font oo bilaash ah, qaababka gelinta, iyo midabada. Intaa waxaa dheer, waxaad sidoo kale tafatiri kartaa noocyada iyo midabada si aad u aragto sida ay ugu muuqan doonto mashruuca daabacaaddaada.
Abuur saamayn sawir cabsi leh isla markaaba adoo isticmaalaya Adobe Photoshop Elements. Cunsurrada waa barnaamij tafatir fudud oo haddana awood leh oo sawir dhijitaal ah. Abuur saamayn hal abuur leh sida ku darista qoraalka, hooska, iyo saamaynta iftiinka ee sawiradaada adoo adeegsanaya midabyo badan, kala duwanaansho, iyo miiraha midabka badan ee la heli karo. Si kor loogu qaado sawirka leh Elements Photoshop, ku dar qoraalka, hooska, iyo laydhadhka qalinka stylus. Natiijooyinka xirfadeed ee lagu daray, ku dar qoraalka, hooska, iyo nalalka qalinka qalinka.
Ku hagaaji sawirradaada adoo kaashanaya rinjiga rinjiga. Si fudud wax uga beddel oo u soo bixi sawirkaaga khadka tooska ah. Goynta sawir ama ku darista qaababka qaar ayaa uga sahlan Paintbrush. Waad abuuri kartaa laba jibbaaran, oval, ama qaab kasta oo kale adoo kaashanaya Paintbrush. Waxa kale oo aad ku beddeli kartaa sawir khadka tooska ah adoo goynaya qaybta kore ama hoose ee sawirka isla markaana codsan kara miirayaal si aad sawirka ugu xoojisid Airbrush.